Dika mgbochi mgbochi njem US na -adị mfe, njem si UK ga -ebili nde 10
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » Dika mgbochi mgbochi njem US na -adị mfe, njem si UK ga -ebili nde 10
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA
Na ntuli aka emere n'oge na -adịbeghị anya, 58% nke ndị na -aza ajụjụ zuru ụwa ọnụ kpughere na chọrọ ichebe iche bụ ihe mgbochi kachasị maka njem mba ofesi, yana 55% ọzọ na -ekwu na mgbochi mmachi njem ga -egbochi ha.
Gaa leta ndị enyi na ndị ikwu (VFR) ndị njem nwere ike ibute ndị chọrọ n'oge mgbake njem ozugbo.
Njem VFR ga -abawanye na ọnụego uto kwa afọ (CAGR) nke 24.8% n'etiti 2021 na 2024.
Ụgbọ elu UK-US ga-akwalite mgbake njem n'etiti mba abụọ ka ọchịchọ maka ụgbọ elu na-abawanye.
Nkwuputa na mmachi njem US maka ndị bi na UK gbara ọgwụ mgbochi ga -ezu ike site na mbido Nọvemba ga -ezute ndị nwere mmasị isonyere ezinụlọ na ndị enyi. Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na -apụ na UK ịga leta ndị enyi na ndị ikwu (VFR) ga -ebili site na nde 10.6 na 2021 ruo nde 20.5 site na 2024 - nke ahụ bụ 24.8% CAGR dị egwu. Nke a bụ naanị ozi ọma maka njem nlegharị anya US, nke ga -erite uru na nnabata nke ndị njem UK.
Njem VFR nwere ike iduga n'ọchịchọ n'ọdịnihu dị ka mmachi njem ga-amalite ibelata yana akpọghela ihe a chọrọ. N'ezie, a na-atụ anya na VFR ga-abawanye n'ike n'ike karịa oge ntụrụndụ, nke a na-adịghị ahụkebe dịka ezumike pre-COVID dị elu karịa na VFR. Ilekwasị anya na njem njem VFR ga -abụ mmegharị amamihe maka ha abụọ UK na US ụgbọ elu, ka ndị njem UK na -achọ ka ha na ndị ha hụrụ n'anya nwee mmekọrịta mgbe ọnwa nkewa gasịrị.
Enweghi ike ime njem ga -agbanwe site n'ibelata mmachi mgbochi na ihe mgbochi iche. Site ná mmalite November, n'ụzọ zuru ezu vaccinated UK ndị njem ga -enwe ike ịgabiga ihe mgbochi iche ma chee mmachi njem ole na ole mgbe ha na -abanye US. Agbanyeghị, ha ka ga-achọ ịnye ihe akaebe nke nsonaazụ ule adịghị mma karịa ụbọchị atọ tupu njem ma ọ bụ ihe akaebe nke mgbake sitere na COVID-19 n'ime ọnwa atọ gara aga.
Ntụrụndụ a dị mma maka ndị chọrọ ịkwaga mba ọzọ. Ndị US anọwo ogologo oge ebe ndị njem nlegharị anya UK na nyocha ụlọ ọrụ na -egosi na US bụ obodo nke ise na-ewu ewu na mba ụwa na 2019. Site na mmachi na-ebelata ọ ga-abụ na ọ ga-ahapụ arịrịọ pent-up ma nye nnukwu ego maka ụlọ ọrụ njem.
Ụgbọ elu na-aga n'ihu nwekwara ike rụọ ọrụ n'ịmepụta ego ha chọrọ na mmụba nke ugboro ụgbọ elu.
UK-ndị ụgbọ elu siri ike nwere US Nhazi oge ụgbọ elu, gụnyere British Airways na Virgin Atlantic, akọpụtala oke ịrị elu maka ụgbọ elu na US. Ọ ga -abụ na ndị njem ga -amasị ụgbọ elu na -aga n'ihu ka ha na -enye ohere maka ahụmịhe enwere ike ịdị nchebe karịa ijikọ na ọdụ.